भक्तपुर पुगेर देउवाले भने : महेशजी! सक्नुहुन्छ भने दुर्लभ थापालाई हराउनुस् « AayoMail
भक्तपुर पुगेर देउवाले भने : महेशजी! सक्नुहुन्छ भने दुर्लभ थापालाई हराउनुस्
2021,3 September, 12:32 pm
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतलाई भक्तपुरका कांग्रेस जिल्ला सभापतिलाई चुनावमा हराएर देखाउन चुनौती दिएका छन्। केही दिनअघि भक्तपुरबाट निर्वाचित एमाले सांसद बस्नेतले भक्तपुरमा देउवा चुनावमा उठे आफू लड्न तयार रहेको बताएका थिए।
‘महेसजी मलाई होइन भक्तपुर कांग्रेसका जिल्ला सभापति दुर्लभ थापालाई हराउनुस्,’ सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५ को वडा अधिवेशन उद्घाटन गर्दै देउवाले भने,‘कांग्रेस अगाडि बढिसकेको छ। सक्नुहुन्छ हुन्छ भने दूर्लभजीलाई चुनावमा पराजित गर्नुस्।’
देउवाले आगामी चुनावमा कांग्रेसको उपस्थिति बलियो रहने दाबी गरेका छन्।
कांग्रेस सशक्त ढंगले अघि बढिसकेको बताउँदै उनले महाधिवेशनमार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गरेर पार्टी थप बलियो जिकिर गरे। महाधिवेशन सफल बनाउन एकताबद्ध भएर लाग्न उनले नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।
भक्तपुर वडा नम्बर ५ सांसद बस्नेतकै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छ।